Ntuziaka Njem nlegharị anya nke Uganda laghachi azụ n'agbanyeghị nsogbu COVID-19 | Akụkọ njem Uganda
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Uganda » Ndị na-ahụ maka njem nleta na Uganda na-eweghachi azụ n'agbanyeghị nsogbu COVID-19
Tour Guides Forum Uganda (TGFU), dị ka akụkụ nke obodo ha izu gara aga, sonyere na ọrụ ebere maka obodo ndị na-adịghị ike.
DFKU bụ otu aha ndị ndu njegharị na ndị ọkwọ ụgbọ njem na Uganda.
Ọbụna mgbe ndị otu ya na-ebu oke oke ọrịa COVID-19 kemgbe ebuputara mba ahụ na Machị 2020, ọrụ ebere bụ ihe kacha mkpa.
Ndi otu a nyere ndi nwere nsogbu n’obodo Ngora nke Soroti nke di na odida anyanwu Uganda, oche ndi ngworo, uwe, ihe eji ehicha ocha, na ncha.
Mkpọchi nke abụọ nke mere na mbido ọnwa June hụrụ ka ndị njem na-ewepụ ndị na-ahụ maka njem njem site na ndị ọrụ ikikere na-enye ikike ikike ka ha rụọ ọrụ na-enweghị ihe mgbochi mgbe ndị Ngalaba Na-ahụ Maka Transportgbọ njem nke Mịnịsta nke Ọrụ na Transportgbọ njem, kwụsịtụrụ maka ndị njem si mba ọzọ. Agbanyeghị na nke a bụ ezumike maka ndị ọrụ njegharị na ndị nduzi otu, ọtụtụ ụlọ ọrụ juputara na kagbuo ma chọọ imeghari ma ọ bụ resor ikike gorilla kpamkpam, na-eme ka olileanya ghara ịmalitekwa mpaghara ahụ.
Lodfọdụ ụlọ obibi (aha ndị edepụtara) enweghị nkwenye na iwu ịkagbu ha, na-agba ndị na-eme njem ume ka ha dabere na mkpuchi njem iji mee ka azịza ha maka nkwụghachi, nke ukwuu na-ewe iwe nke ndị na-eme njem.
"N'agbanyeghị ihe ndọghachi azụ ndị ahụ," Onye isi oche nke ndị njem nleta na njem nlegharị anya na Uganda, James Mwere kwuru, "Anyị nwere ndị nduzi bụ ndị tinyeworo ego na mpaghara ndị ọzọ tupu ọrịa a ebute wee nwee ike itinye obere obere ego maka ọrụ ndị a obodo. Ee, ọtụtụ ndị nduzi na-eduzi anaghị arụ ọrụ ihe dị ka afọ 2 ugbu a, mana ọrịa a na-enye anyị ihe anyị ga-amụta, ka anyị nwee ike na-agbanwe agbanwe na ego anyị.